एसइई पछि कुन विषय लिएर पढ्ने ? - Nayapul Online
एसइई पछि कुन विषय लिएर पढ्ने ?
प्रकाशित मिति : Friday, June 29, 2018 nayapulonline
काठमाडौं : कक्षा १० तथा एसइई उतीर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरुमा कुन विषय लिएर कुन कलेजमा पढ्ने भन्ने कुराले एक प्रकारको तनाव दिने गर्दछ । यस्तो समयमा विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त र उनीहरुको रुचिअनुसारको विषय तथा कलेज छनोट गर्न अभिभावक र गुरु लगायत अन्य नजिकका पात्रहरुको मार्गनिर्देश महत्वपूर्ण सावित हुन्छ । विद्यार्थीको रुचि र क्षमता तथा एसइईमा प्राप्त गरेको ग्रेड र जिपिएले पनि उनीहरूको आगामी यात्रा तय गर्न सघाउदछ छ । छनोट गर्नु आफैमा पनि जटिल कार्य पनि हो । सही विषय र शैक्षिक संस्थाले भविष्य उज्यालो बनाउने तथा सही छनोट नभएमा भविष्य नै अन्योलतर्फ धकेलिन पनि सक्दछ, त्यसकारण विशेष प्रकारको दख्खल र होशियारी दुवै उत्तिकै जरुरी पर्दछ ।
एसइईपछि धेरै विद्यार्थीले साइन्स, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा जस्ता विषय रोज्न सक्नेछन् । विज्ञान समूहका फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी, गणित वा कम्प्युटर विज्ञान विषय अध्ययनका लागि कक्षा ११ मा भर्ना पाउन कम्तीमा जिपिए २ ल्याउनुपर्ने, विज्ञान र गणितमा सी प्लस, अंग्रेजीमा सी तथा सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने ।
अर्को विकल्प प्राविधिक विषय पनि हो । सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कृषि विज्ञान र पशु विज्ञान विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन सुरु भएको हो । प्राविधिक धारबाट एसएलसी दिएका विद्यार्थीका लागि प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम सबैतिर जान मिल्ने गरी तय गरिएको छ । एनिमल साइन्स र प्लान्ट साइन्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ हुनुपर्नेछ । विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा न्यूनतम सी ग्रेड तथा सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने । यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) मा डिप्लोमा तह पनि अहिले विद्यार्थीहरुका लागि राम्रो विकल्प बनेको छ ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि ए लेभल पनि विकल्प हो । खर्च गर्न सक्ने र विदेशी कोर्स चाहने विद्यार्थीले कक्षा १० पछि ए लेभललाई रोज्ने गरेका छन् । ए लेभल अध्यापन गराउन नेपालमा तीन दर्जन संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाएका छन् ।
ट्रम्प र पुटिन बीचको शिखर वार्ता फिनल्याण्डको हेल्सीन्कीमा
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसः केन्द्रमा नेपाल
पाडापाडीको जन्मदर्ता गरेमा भैँसीलाई ‘सुत्केरी भत्ता’ ५ हजार र पाडीलाई २० हजार !
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवि संघमा महामन्त्री थपिएपछि भाँडभैलो